‘आस्था राउतको अभिव्यक्तिले हजारौं प्रहरीको अपमान भयो’ - VON TV
‘आस्था राउतको अभिव्यक्तिले हजारौं प्रहरीको अपमान भयो’
२ माघ २०७६, बिहीबार १७:५९ 314 ??? ???????
– नारायण गाउँले, बेलायत ।
आस्थाजीले अलिकति सीमा नाघेरै बोल्नुभएछ । उहाँलाई प्रहरीले ‘तँ’ भनेकोमा रिस उठेको रहेछ तर उहाँले त तँ मात्रै होइन, पुलिसलाई फोहोर नालीको कीरा नै भन्नुभएछ । उहाँको आफन्त र इष्टमित्र पनि प्रहरीका माथिल्ला ओहोदामा पुगेजस्तो लाग्यो, उहाँ ओहोदाधारी प्रति अलि नरम देखिनुभो तर तल्लो तहका प्रहरीप्रति उहाँले प्रयोग गरेका शब्द र गाली निम्नस्तरको देखियो ।
उहाँ राष्ट्रिय स्तरको कलाकार हुनुहुन्छ । सम्मान गर्नु कर्तव्य हो । तर उहाँ विश्वभ्रमण गरिरहनुहुन्छ । उहाँलाई थाहा हुनुपर्ने हो, एउटा कलाकार भएकैले सार्वजनिक सेवामा ‘विशेष ट्रिटमेन्ट’को अपेक्षा राख्नु पनि राम्रो होइन । सबैले आआफ्नो ठाउँमा हो सम्मान पाउने । सार्वजनिक ठाउँमा सबै समान हुन्छन् । कलाकार त अझ हाम्रो समाजका लागि रोलमोडल हुने भएकाले नम्र, भद्र र सभ्य हुनुपर्छ ।
उहाँ अपमानित भएकोमा दुःख लागेको छ तर उहाँको अभिव्यक्तिले हजारौं प्रहरीको अपमान भएकोमा पनि उत्तिकै दुःख लागेको छ । अब सार्वजनिक रूपमा उहाँले पिउसो, डन्ठे, बन्दुके भनेका प्रहरीले उहाँलाई कसरी आदर गर्न सक्लान् ? यो त काम र त्यसको तहलाई लिएर हेपिएको अभिव्यक्ति भयो ।
अझ उहाँले कुनै अमुक प्रहरीलाई लक्षित गरेर ‘त्यो डन्ठी’ भन्नु र ‘लौरो मुखबाट कोचेर कुन्नि कहाँबाट निकालिदिने थिएँ’ भन्नु एउटा कलाकारको निम्ति कत्ति नसुहाउनु पर्ने हो । बाहिर यस्तो अभिव्यक्ति सिरियस र दण्डनीय हुन्छ । उसो त प्रहरीले बाहिर हेपेर बोल्दैनन् पनि ।
प्रहरीले सिक्नु र सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । अलिकति शिक्षा आस्थाजीको फिडब्याकबाट पनि लिन सकिन्छ । तर सबैले आस्थाजीकै शैलीमा सुधारको शिक्षा दिन थाल्ने हो भने के होला ? अलिकति सुधार त कलाकारमा पनि चाहिने देखियो ।
विदेशी दानले को समृद्ध भएको छ ?
नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० नाममा मात्रै सिमित नहोस् !
व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षामा चुर्लुम्म पत्रकारिता विभाग
“डलरको डकार” ! आखिर कहिलेसम्म ?